Ngwurugwu mmiri nke Pelagic na benthic, olee ihe dị iche? | Azu
Pelagic na benthic mmiri ntule
O doro anya na oké osimiri na oké osimiri bụ otu n’ime ebe ha si enweta mmiri nke bara ọgaranya, na usoro nke ihe dị iche iche dị na mbara ala Wa. Ọtụtụ ndị ọbịa nọ n'ime ya na-eme ha ebe ndị mara mma. Ndị ọbịa dị iche iche, ọkachasị, n'ụdị ha, ogo ha, ụcha ha, agwa ha, ụdị nri ha dg.
O doro anya na usoro mmiri dị na mmiri dị iche na ibe ha. Njirimara ha nwere ike di oke iche, nke na emetuta, n'uzo doro anya, ha ikike obibi ma ọ bụ na ọ bụghị.
N’ụzọ ezi uche dị na ya, ọnọdụ ibi ndụ na mmiri miri emi ma ọ bụ n’akụkụ ụsọ mmiri abụghị otu. N'ebe ahụ, ọkụ dị ọtụtụ, ọnọdụ okpomọkụ na-enwe mgbanwe dịgasị iche iche, mmiri na-agagharị na mmiri na-adịkarị ma dị egwu. Kaosinadị, ka anyị na-agbadata n’ime ime omimi, anyị na-ahụ ihe osise dị iche. Maka nke a, ihe ndị dị ndụ na-adịkarị iche iche dabere na mpaghara oke osimiri ma ọ bụ oke osimiri ha na-emepe ndụ ha.
Ọ bụ ebe a ka okwu abụọ nwere ike anyị amaghị anyị mee ka ha dị: pelagic y Emechie
1 Pelagic na benthic
2 Nkọwa nke nje pelagic
3 Azụ azụ
3.1 Akuku osimiri
3.2 Osisi Oceanic
4 Synonym maka ntanu pelagic
5 Nkọwa nke ihe na-eme benthic
6 Benthic azụ
7 Synonym nke ihe di iche iche
Pelagic na benthic
Pelagic na-ezo aka n'akụkụ oke osimiri dị n'elu mpaghara pelagic. Nke ahụ bụ, na kọlụm mmiri nke na-adịghị na mbara ala ma ọ bụ jikọrọ ọnụ, mana ọ dị nso na ya. O bu oke mmiri nke n’enweghi omimi. Maka akụkụ ya, benthic bụ onye na-abụghị. O metụtara ihe niile jikọtara ya na oke osimiri na oke osimiri.
N'ụzọ siri ike, a na-ahụ ihe dị iche iche dị ndụ n'ime mmiri, n'etiti ha bụ azụ, dị iche na nnukwu ezinụlọ abụọ: pelagic ntule y ntughari anumanu.
Ọzọ, anyị na-aga n'ihu ịkọwa nke ọ bụla n'ime ha:
Nkọwa nke nje pelagic
Mgbe anyị na-ekwu okwu banyere ihe ndị na-eme ka ahụ ghara ịna-eme mmụọ, anyị na-ekwu maka ụdị ndị ahụ niile bi na ya etiti mmiri nke oke osimiri na oke osimiri, ma obu na nso ala. Yabụ, o doro anya na ụdị ndụ ndị a na-ebi n'ime mmiri na-amachi mmekọrịta na mpaghara nke oke omimi.
A na-ekesa ha na oghere ndị na-enwu nke ọma, site na elu n'onwe ya ruo mita 200 miri. A maara oyi akwa a dị ka mpaghara phiotic.
Okwesiri ighota na onye iro kachasi ndu ndi a nile bu azu azu.
E nwere ụdị ihe abụọ dị mkpa nke ihe na-akpata pelagic: nekton, plakton na neuston.
N'ime ya bụ azụ, turtles, cetaceans, cephalopods, wdg. Ngwurugwu ndi, site na mmeghari ha ike igbochi oke osimiri.
A na-ahụ ha, n'ụzọ bụ isi, site n'inwe obere akụkụ, mgbe ụfọdụ microscopic. Ha nwere ike buru nke akwukwo nri (phytoplankton) ma obu nke umu anumanu (zooplankton). O di nwute, ihe ndi a, n'ihi ha, ha enweghị ike imeri oke osimiri, ya mere ha ji dọkpụrụ ha.
Ha bụ ndị ahụ dị ndụ mebere ihe nkiri ihu igwe nke mmiri.
Ọ bụrụ na anyị lekwasị anya na otu ndị mejupụtara azụ dị iche iche dị ka ndị dị otu a, anyị nwere ike ịme ngalaba ọzọ, nke dina, n'otu ụzọ ahụ, dabere na mpaghara mmiri ha juru:
Ngwurugwu pelagic n'ụsọ mmiri na-abụkarị obere azụ na-ebi na nnukwu ụlọ akwụkwọ na-agagharị na shelf ụwa na n'akụkụ elu. Ihe omuma atu nke a bu anumanu dika anchovies ma obu sardines.
N'ime otu a, ọkara na nnukwu ụdị na-akwaga. Ha niile nwere njirimara, ma anatomical na physiological, dị ka nke ndị ikwu ha n'ụsọ osimiri, ebe usoro nri ha dị iche.
N'agbanyeghi na ha nwere oso ososo ma nwekwaa onodu di elu, onu ogugu nke onu ogugu ha di obere ala, na eme ka mmepe ha jiri nwayọ. Nke a bụ n'ihi na ha nọ n'okpuru oke azu.
Azụ dịka tuna na bonito bụ ụdị ihe atụ nke ihe na-akpata ọrịa pelagic nke oke osimiri.
Synonym maka ntanu pelagic
Ebe obu na okwu ahu bu “pelagic” narutu aka n’otutu uzo nke oke osimiri na oke osimiri, okwu puta ozo nke anakoro ya kpo ya n’ọnọdụ ya dika odi "abyssal". Ya mere, n'otu aka ahụ anyị na-ezo aka na nje na-akpata pelagic na azụ, anyị nwekwara ike ịgwa ha okwu dịka azụ ma ọ bụ ihe ndị dị ndụ.
Nkọwa nke ihe na-eme benthic
Benthic ntule bụ ndị na-ebikọ na aquatic ecosystems ndabere, n'adịghị ka ahịhịa pelagic.
N'akụkụ ndị a nke oke osimiri ebe ọkụ na nghọta na-apụta, ruo obere oge, ee, anyị na-ahụ ndị isi na-emepụta benthic photosynthesizers (nke nwere ike ịmepụta nri nke ha).
Ugbua mikpuru n'ime ndabere aphotic, enweghị ìhè ma dị n’ebe miri emi, enwere ihe ndị dị ndụ, nke dabere na nsị anụ ahụ na microorganisms nke ike ndọda na-adọta site na mmiri kachasị elu iji zụọ onwe ha.
Okwu dị iche bụ nje bacteria, n'otu aka akụrụngwa na nke ọzọ ihe omuma (Ha dabere na ntule ndị ọzọ), nke dị na mpaghara dị egwu dịka isi ihe ụfọdụ nke etiti oke osimiri.
Na ileba anya mbu, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na, mgbe anyị gụsịrị ihe ndị dị n'elu, anyị amachaghị ihe dị iche iche na-eme ngwa ngwa. Ọ dịghị ihe nwere ike ịbụ n'ihu si eziokwu. E nwere ụdị jikọtara ha nke ama ama nke ọma ma mara ha niile: koral.
N’enweghi obi abụọ, akuku coral bụ otu n’ime ọla dị oke ọnụ ahịa nke ala ụwa. Agbanyeghị, na nwute, ha bụkwa ndị kachasị egwu. Fọdụ usoro ịkụ azụ, mgbe ụfọdụ ọ na-adịkarị ọdịnala, na-egbu ha. Dị ka ihe atụ, anyị na-ekwu okwu banyere ụgbụ trawl, nke na-ebute oke nsogbu gburugburu ebe obibi.
Ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ndụ bụ akụkụ nke nnukwu ezinụlọ benthic. Anyị na-ekwu maka echinoderms (kpakpando na urchins n'oké osimiri), ndị Ndidi (ọbụ na ihe ndị yiri ya), ihe cephalopods (octopus na azụ azụ), na bivalves y molok na ụfọdụ ụdị nke algae.
Dịka e kwuru n'elu, n'ime ihe ndị dị ndụ dị iche iche, anyị na-ahụ ụdị azụ ndị ahụ akpọrọ "peluronectiform", nke dị n'usoro azụ ndagharị, roosters na naanị.
A na-ahụ azụ ndị a site na ịnwe morphology dị iche. Ahụ ya, nke ukwuu abịakọrọ n'akụkụ, na-eru a ịkpụzi ọdịdị, na-ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị. Of ighe, ha nwere mpụta symmetry, na anya na nke ọ bụla. Mmetụta dị n'akụkụ nke na-apụ n'anya ka ha na-etolite. Ndị okenye, ndị na-ezu ike n'otu akụkụ ha, nwere ahụ dị larịị ma dozie ụfọdụ n'akụkụ nke elu.
Dị ka a na-achị, ha bụ azụ na-eri anụ ma na-eri anụ, nke ndị na-ejide ha na-eme site na usoro ịchụ nta.
Speciesdị ndị a na-ahụkarị, ebe ọ bụ na ha bụ ndị a na-ejikarị eme nri na ịkụ azụ, bụ naanị na turbot.
Synonym nke ihe di iche iche
Ọ bụrụ na anyị nyochaa akwụkwọ sayensị dị iche iche ewepụtara maka ụtụ isi na nhazi nke ala anụmanụ, anyị nwere ike ịhụ ihe dị ndụ na benthic naanị "Bentos" o "Benthic".
Nature bụ ụwa na-adọrọ mmasị, yana usoro okike dị na mmiri kwesịrị isiakwụkwọ dị iche. Ekwu okwu banyere pelagic na benthic ntule bụ ihe dị mgbagwoju anya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mgbagwoju anya. Ntụle a dị ntakịrị gosipụtara, na ọrịa strok sara mbara, nkọwa ndị dị iche na ibe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ » Pelagic na benthic mmiri ntule
ezigbo ihe atụ na ezigbo nchịkọta
ọ dịghị ihe ọzọ karịa ịga n'ihu dị ka nke a ma ana m ekele gị nke ukwuu maka calos, ugbua k, ọ bara ezigbo uru
Nzaghachi jose fernando obama
eziokwu ahụ na-atọ m ezigbo ụtọ, ọ baara m ezigbo uru ịlaghachi n’isiokwu a, ekele.
Zaghachi ka javier chavez